[Vc_row] [vc_column] [vc_column_text]Tenerife chitsuwa chinoputika mumahombekombe egungwa reAtlantic icho chiri yeVatombo yeNharaunda yeCanary Island (Spain) uye European Union. Iyo inogara munharaunda inenge 2000 sq km. uye ine huwandu hwevanhu vangangoita zviuru 900.000 vanhu. Tenerife inzvimbo inozivikanwa yekushanya uye inowana vangangoita 6.000.000 vashanyi pagore.
Tenerife inozivikanwa se "chitsuwa chekusingaperi chitubu". Mamiriro ekunze ayo akapfava anoumbwa nemhepo yekutengesa, mafungu uye makomo anopatsanura chitsuwa ichi munzvimbo dzakasiyana siyana dzemamiriro ekunze. Mwaka yekushambira muTenerife ndeye gore-gore uye hwepakati anual tembiricha iri 21C.
Ichi chiwi chitsuwa chine hunyanzvi hwakagadzirwa zvakanaka: nhandare mbiri dzemazuva ano, mapaki maviri makuru uye akawanda marinas, migwagwa mikuru ine 120 km / h kumhanya muganho, mapaki emunyika, zvipatara, zvikoro etc. Zvitsuwa zveCanary zvakabatana zvakanaka neredhi uye ndege dzemunharaunda uye kune mazana dzezuva nezuva ndege dzese kuenda kune dzimwe nyika dzeEurope dzinoshandirwa nemameya akati wandei makambani emhepo.
Tenerife ine ecology yakakwana sezvo pasina inorema indasitiri kana mafekitori makuru. Iko kunogara kune mweya mutsva unotenderera uchibva kumakungwa nekuda kwemhepo dzekutengeserana.
Chikamu chemhosva chakaderera kwazvo uye kazhinji chitsuwa chacho chakachengeteka kwazvo uye chakachengeteka.
Canary Islands uye Tenerife ndiyo nzvimbo yekumaodzanyemba kweEuropean Union uye inodziya nzvimbo muEurope panguva yechando. [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]